Apple mividy startup Emotient | Avy amin'ny mac aho
Raha ny filazan'ny Wall Street Journal dia mety ho nahazo vao haingana i Apple fanombohana kely antsoina hoe Emotient izay niorina tamin'ny orinasany tamin'ny fampiasana ny haitao famantaran-tarehy ho an'ny indostrian'ny dokam-barotra sy ny varotra. Ny fitsapana aza dia natao tamin'ny sehatry ny fitsaboana ho an'ny famakafakana ny fanaintainana koa.
Ho fanampin'izany, ny tranokala Emotient dia nampiroborobo ny fahafahan'ny teknolojia ho raiso ny valiny ara-pientanam-po mivantana avy amin'ny mpanjifa. Ny fisalasalana tokana manenjika ahy dia ny fomba hampidiran'ny Apple ity fanekena endrika mifototra amin'ny fihetsem-po ao anaty rindrambaiko ity hanangonana angon-drakitra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fiainany manokana ny mpampiasa, angamba nampitandrina izy io taloha fa ny statistikan'ny fampiasana tsy fantatra anarana dia horaisina miaraka amin'ity haitao ity eo anelanelany .. . ho hitantsika eo.
Raha ny tenin'ny orinasa mihitsy:
Ny fampiasana ny fanekena ny fihetseham-po sy ny fandalinana azy manaraka dia samy hafa sy tsy mitovy amin'ny an'ny toetran'ny mpanjifanay. Na aiza na aiza misy fakantsary, tsy misy ny tsy fahampian'ny fanadihadiana amin'ny horonan-tsary momba ny fanehoan-kevitra, fotoana iray hianarana momba ny fanjakan'ny mpanjifa sy ny zavatra eritreretin'izy ireo rehefa mamaly am-pientanam-po ireo traikefa amin'ny varotra vokatra sy serivisy izy ireo.
Ny vidin'ity fisamborana ity dia mbola tsy fantatra, fa araka ny ny fampahalalana rehetra avy amin'ny famoahana samihafa Toa nanamafy ny vaovao izy ireo. Na izany aza, efa fantatsika fa tena liana amin'ity karazana haitao ity i Apple satria efa-bolana lasa izay dia nividy orinasa hafa koa izy io endri-javatra mitovy amin'izany antsoina hoe Faceshift, orinasa Soisa manokana amin'ny fakana sary miorina amin'ny fakana sary mihetsika telo-telo. Na dia tamin'ny taona 2010 aza dia nahazo ny orinasa mpamantatra endrika tarehy Suède Polar Rose koa i Apple.
Tsy mbola mazava ny fikasan'i Apple, saingy toa zavatra mitady fatratra ary tsy vitan'ny fampidirana endri-javatra vaovao efatra nisaina tamin'ny kinova manaraka amin'ny rafitra, fa mety hitarina amin'ny sehatra toy ny fiarovana biometrika, ohatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple mividy startup Emotient hampivelatra rindrambaiko miorina amin'ny fanekena ny tarehy
Apple dia hanafoana tanteraka ny serivisy One to One amin'ny 17 Desambra